Siyaasadda ka dambeysa waqtiyada dalalka - BBC Somali
Siyaasadda ka dambeysa waqtiyada dalalka
Waqooyiga Korea ayaa dib u dhigi doonta saacadeed Pyongyang, taasi oo ah tallaabo siyaasadeed oo ay ku tirtireyso saameynta uu Japan ku leeyahay.
Balse kali kuma ahan Waqooyi Korea in dagaalka siyaasadeed ee lagu badalayo saacadda: laga soo bilaabo Shiinaha illaa iyo Venezuela, waxaa ka socda isbadalo badan oo lagu sameynayo saacadda.
Waqtiga waqooyiga Korea saacad ayaa dib loo dhigayaa Sabtiga kaddib go'aanka dowladda ay ku sameyneyso saacad iyada u gaar ah oo la yiraahdo "Waqtiga Pyongyang". Abuurista waqti qaaradeedkan cusub waa astaan looga xoroobayo, waqtiyadii hore ee la xiriiray gumeysigii Japan. Taariikhda la go'aansaday in saacadda lagu badalo ayaaba astaan ah, waxay astaan u tahay 70 guurada ka soo wareegatay markii waqooyiga Korea laga xoreeyay Japan. Waxayna waqooyiga korea noqoneysa dalkii ugu dambeeyay ee ku biira kuwa ka baxay wixii lagu socday.
"Iskama xariiqi kartid qariidad dunida, oo mar hirgelin kartid. Dalalku waa go'aansan karaan meesha xadka u ah waqti qaaradeedkoodu, balse tani waa arrin siyaasadeed" ayuu yiri Rory McEvoy oo ka tirsan Royal Observatory Greenwich.
Qarnigii 19aad ayey magaalooyinka waqtigoodu ku saleyn jireen qoraxda. Meesha ugu sareysa qoraxda ayey kala barka maalinta ka dhigan jireen. Taasi waxay aheyd inay kala waqti duwanaadaan labo magaalo oo 200 mile isu jira, tareenada iyo qeybaha ganacsiga ayey dhibaato ku aheyd.
Bilowgii shabakadaha tareenada iyo kacaankii warshadaha ayaa horseeday in la abuuro waqati caalami ah.
1884tii ayaa shirkii Merdian dunida loogu kala qeybiyay waqti qaaradeed 24 saac ah, iyadoo inta badan maalinta ay dheereyd.
Habka loo yaqaano (Greenwich Mean Time, GMT) ayaa dib loogu bixiy waqtiga guud ee loo yaqaano (UTC).
Waqtigaaga iyo doorashadaada.
Kala qeybsanaanta waqtiga dunida waxaa sabab u ah siyaasad, iyadoo ay haatan jiraan in ka badan 40. Dalal badan ayaa ka caga jiidaya inay waqtigoodu sameystaan.
Tusaale ahaan, Afghanistan iyo Iran ayaa leh sababahooda gaarka ah, iyagoo labo waqti qaaradeed ku kala jira, waxayna isugu yimaadeen 30 daqiiqo inay u dhexeyso labadooda dal. Kuwa kalena waxay waqtiga u adeegsadaan inay ku xoojiyeen astaantooda qaran, iyadoo waqtiga ka muuqda saacadda dalka uu ka hadlayo halka ay awooddu taalo.
Shiinaha ayaa isku fidiyay ku dhawaad 5000km iyo waqtiyo shan qeybood ah iyadoo dowladdu ay dalka isugu keentay hal waqti oo la yiraahdo waqtiga Beijing. Waqtigan ayuu Shiinuhu sameystsay sanadkii 1949kii si kor loogu qaado midnimada qaranka maalimihii ugu horeeyay ee xisbiga Shuuciyadda.
India ayey gobaladeedu wadaagaan hal waqti oo la soo saaray waqtigii xorrayadda
Venezuela ayaa waqtigeedi wax laga badalay
Sanadkii 2007kii madaxweynihii hore, Hugo Chávez, ayaa go'aansaday inuu deg deg u badalo waqtiga, si wax soo saarka wadanku kor loogu qaado. Wuxuuna ku sheegay in isbadelka uu keenayo in qoraxda si sax u qeybsanaato.
Russia ayaa tusaale u ah kuwa ka baxay siyaasadaha waqtiga, maadama ay kordhiso, ayna yareyso tirada waqtiyadeeda. Wadanka ayaa hadda leh 11 qeybood.
Maadama waqtiyo badan oo laga tagay ay jiraan sida kan waqooyiga Korea, arintu ma ahan Juquraafi ama dhaq dhaqaaqa waqtiga dayaxa ee waa awoodda.